मौद्रिक नीतिः राष्ट्र बैंकको विशेष प्राथमिकता मर्जर, कसले के दिए सुझाव ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > मौद्रिक नीतिः राष्ट्र बैंकको विशेष प्राथमिकता मर्जर, कसले के दिए सुझाव ?
काठमाडौं, २२ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक रायसुझाव सरोकारवालाहरुसँग संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त रायसुझावमाथि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसपटक पनि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई मर्जरमा जान विशेष प्राथमिकताका साथ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
स्रोतको अनुसार अनुसार राष्ट्र बैंकको चाहना बमोजिम ठूला बैंकको संख्या नघटेपछि अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आएको मर्जर व्यवस्थालाई नै यसपटक पनि प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अत्याधिक भएको र नियमन निकायले नियमन गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने नीति लिँदै आएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सोही बजेटको कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो ।
मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरु सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उठेको कर्जालाई चालु आवमा उठेको आधारमा वर्गीकरण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै संघले २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम ०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने पाउने माग राखेको हो ।
रोकिएन् शेयर बजारको ओरालो यात्रा, कारोबार सवा ४ अर्बमा सीमित